Buugaag Custom, Bag Paper Custom, Sanduuqa Waraaqaha Gaarka ah - SmartFortune
Bacda Warqadda Khaaska ah
Sanduuqa Warqadda Khaaska ah
SmartFortune Baako Co. Ltd waa soo saare daabacaadda & Baakadaha daabacaadda ee Shiinaha oo ku takhasusay soo saarista noocyo badan oo daabacaad ah buugaag daabacan, sanduuqyo loo habeeyay, bacaha waraaqaha la adeegsaday iwm.
Warshaddeenu waxay ku taal magaalada DongGuan, Gobolka GuangDong, Shiinaha; Waxay u dhowdahay HongKong, ShenZhen iyo GuangZhou, kaliya qiyaastii 1 saac baabuur.
Waxaan haynaa qiyaastii 360 shaqaale xirfad leh, oo ka faa'iideysano khibradeena 25 sano, waxaan siin karnaa macaamiisha xalka dabacsan ee qiimaha warshadda tartameysa iyo gaarsiinta degdegga ah ee nabadgelyada albaabka.
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho qiimahaaga, waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.
Sanduuqa warqadda ee khaaska ah
Buugga Ciyaaraha Ciyaaraha loogu talagalay carruurta
daabac buug sheeko midabaynta
daabacaadda buugga karinta
astaysto sanduuqa baakadaha isku laabmaya
soo saar sanduuqa kartoonka oo leh dariishadda PVC
sanduuqa hadiyad isku laabma jumlada
soo saar sanduuqa hadiyadaha Shukulaatada
bacda warqad kraft jumlada
soo saar warshad bacda waraaqda wax iibsaneysa
Kaydso kharashkaaga waayo-aragnimadayada in ka badan 25 sano ee daabacaadda iyo warshadaha baakadaha.
Jawaab degdeg ah oo ku saabsan weydiintaada -Haddii aad rabto, waxay kugu noqon kartaa 24 saacadood khadka tooska ah adiga.
Bixi caawimaad qaabeynta farshaxankaaga buugaagtaada caadada ah, sanduuqyada la qaabeeyay iyo boorsooyinka gaarka ah.
QC waxay si adag u xakameysaa talaabo kasta inta lagu jiro wax soo saarka ballaaran ee tayada wanaagsan
La kulan taariikhda gudbinta degdegga ah ee loo baahan yahay haddii macaamiisha ay rabaan
Jawaab deg deg ah su'aalaha-shilalka kadib ama dhibaatooyinka haddii ay jiraan
Daabacaadda xirmada oo leh qalab baakado kala duwan
Weelasha ama xirxirashada, iyo howlaha qurxinta alaabada. Baakaduhu waa sii socoshada habka wax soo saar ee badeecooyinka habka wareejinta, waana xaalad lama huraan u ah badeecadaha inay galaan goobaha wareegga iyo isticmaalka. Doorka baakaduhu waxay leeyihiin kuwa soo socda ...
Maxay yihiin siyaasadaha Shiinaha si ay u taageeraan horumarka xoogga leh ee warshadaha daabacaadda iyo baakadaha?
Maxay yihiin siyaasadaha Shiinaha si ay u taageeraan horumarka xoogga leh ee warshadaha daabacaadda iyo baakadaha? Maaddaama warshadaha daabacaadda iyo baakadaha ay leeyihiin awood xoog leh oo ay ku nuugaan foosha, iyo heerka wasakhaynta deegaanka ay yar tahay, dawladdaha maxalliga ah iyo kuwa maxalliga ahi waxay leeyihiin ...
Intee in leeg ayaad ka ogtahay heerarka ilaalinta deegaanka ee daabacaadda buugaagta carruurta?
Caruurta Shiinaha ee daabacaada buugaagta buugaagta ayaa noqoneeysa mid barwaaqo soo kordheysa iyadoo waalidiinta ay ahmiyad gaar ah siinayaan akhriska iyo inbadan waalidiinta ayaa ahmiyad gaar ah siinaya akhriska. Mar kasta oo dukaan internetka ah la dallacsiiyo, xogta iibka ee buugaagta carruurta had iyo jeer waa wax aad u cajaa'ib leh. Halka ...
Awood intee le'eg ayey leedahay suuqyada buugaagta carruurtu?
-Waxaa laga soo qaatay SmartFortune Sina Education "2017 Warqadda Cad ee ku saabsan Isticmaalka Waxbarashada Qoyska Shiinaha" (hadda kadib loo yaqaan "Waraaq Cadaan ah") maalmo ka hor. "Waraaqda Cad" waxay muujineysaa in saamiga isticmaalka waxbarashada qoysku ay sii socoto ...
Wadada Nan Chang, Aagga Maamulka Chijiao, wang Niu Dun, dongguan, gd, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2012-2023: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay